Fanomezana iraisam-pirenena: mahazoa LG G6 | Androidsis
Fanomezana iraisam-pirenena: mahazoa LG G6 maimaim-poana
Jose Alfocea | | fifaninanana, About us
Manomboka ny herinandro izahay amin'ny vaovao izay tian'ny ankamaroan'ny mpampiasa satria raha mieritreritra ny hanavao ny telefaona findainao taloha ianao fa efa mihalasa loatra ny hantsana septambra dia manana fotoana izao ianao mahazo LG G6 mahafinaritra maimaim-poana.
Ny LG G6 no sainam-pirenena ankehitriny an'ny orinasa Koreana Tatsimo manana izany anarana izany. Nalefa tamin'ny volana martsa lasa teo, manana efijery ity terminal ity IPS 5.7-inch miaraka amina vahaolana 2880 x 1440 miaraka amin'ny fiarovana Corning Gorilla Glass 3, processeur Snapdragon 821, 4 GB, fitehirizana 32/64 GB, Android 7.1 Nougat eo ambanin'ny sosona, Optimus UX 6.0, fakan-tsary miisa 13 MP ary bateria 3300 mAh ho endri-javatra miavaka indrindra. Ary ankehitriny dia mety ho anao amin'ny tarehy izany.
LG G6 maimaim-poana
Toy ny mahazatra isan-kerinandro, ny bandy avy amin'ny Android Authority dia nanolotra fanomezana vaovao ary amin'ity indray mitoraka ity dia manana fotoana ahazoana ilay vaovao ianao LG G6 maimaim-poana tanteraka.
Ny antsapaka dia internacional Noho izany, na aiza na aiza onanao, dia ho afaka handray anjara sy hanana fotoana mety ho mpandresy vaovao, na mpandresy. Mba hanaovana izany, ny sisa ataonao dia tsidiho ny tranokala fanomezana izay atao amin'ny alàlan'ny rafitra gleam.io. Aza adino fa adiresy mailaka tokana ihany no azonao andraisana anjara (aza adino fa tsy maintsy hamarinina ny momba anao raha toa ka mandresy, ka azo foanana ny fandresenao raha hitanao fa namitaka ianao) fa ho takalony afaka mahazo mizara maro ianao. Ary arakaraka ny isan'ny fandraisana anjara no maha betsaka ny vintana handresena. Ohatra, isan'andro dia afaka mamoaka bitsika amin'ilay antsapaka ianao, ary hahazo fidirana vaovao ianao; Ary isaky ny mizara izany ianao dia hahazo fandraisana anjara hafa. Amin'izany no mitombo ny vintana handresy.
Hatao mandritra ny herinandro ny raffle… Mirary soa !!!!
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » Fanomezana iraisam-pirenena: mahazoa LG G6 maimaim-poana
Jorge Fuentes Jimenez dia hoy izy:
Te handray anjara amin'ny namana aho
Valiny tamin'i Jorge Fuentes Jiménez
Dimar Escalona A. dia hoy izy:
Te handray anjara aho !, Misaotra
Valiny tamin'i Dimar Escalona A
francisco javier sanchez lopez dia hoy izy:
tsara Manantena aho fa hahazo vintana amin'ny XD rehetra
Valio amin'i francisco javier Sanchez lopez
Cristian mogollon montes dia hoy izy:
Te hanana an'io finday mahafinaritra io aho !!!
Valio amin'ireo montes Cristian mogollon
Saul Torres Equihua dia hoy izy:
Te handray anjara amin'ny fisarihana an'io finday tsara tarehy io aho !!!
Valiny tamin'i Saul Torres Equihua
Te handray anjara amin'ny raffle amin'ity finday tsara tarehy ity aho!
Mirary anao ho tsara vintana!!! Ampahafantarinay anao ireo fampiroboroboana ireo, mba hahafantaranao azy ireo ary hanana fotoana handraisana anjara ary, handresy tsara kokoa. Tsara vintana!
Wagner Cáceres Lobatón dia hoy izy:
Fahafahana tena tsara hanana LgG6. Enga anie mba hahita vintana.
Valiny tamin'i Wagner Cáceres Lobatón
Ivette vazquez dia hoy izy:
Tiako ny mandresy an'io telefaona finday io satria tsy manam-bola ahazoana azy aho, misaotra
Mamaly an'i Ivette vazquez
Magyar Cesar Chaparro dia hoy izy:
Manantena aho fa miaraka amiko ny vintana
Valio amin'i magar Cesar Chaparro
Manantena aho fa ho tsara vintana ary ho tonga mpampindram-bola amin'ity ekipa ity ary hankafy zava-baovao
Te handresy io finday io aho
Mirary soa ho anao rehetra!
Azafady azafady aho haha ​​!! ... manana lumia 640xl aho mandritra ny 2 taona miaraka amin'ny toro-hevitra tapaka avy eo amin'ny kapoka ary mandeha miadana tokoa ary tiako ho tratra fotsiny io finday io
Ny Huawei Mate 10 Lite dia mety efa nalahady tany Sina tamin'ny anarana hoe Huawei Maimang 6
Elephone P8 Mini, famakafakana ary hevitra